IT waa cadceedda xilliga qaboobaha. Nalalka iftiinka ee bariga koonfureed waxay kaxeeyaan ciidanka habeenkii oo waxay sheegaan maalinta sarakicista maalinta. Daruuruhu way isusoo uruurinayaan sidii maalinta loo xidho oo loo tuuro hadhka ugu dheer sanadka. Dhirtu way madoobaatay, oo dheecaanku wuu hooseeyaa, oo baraf-jilicsan ayaa ruxa dhulka madowga ah.
Fiidkii ayaa yimaada; Daruuro ayaa cirka u rogaya il biyood. Dabayshu waxay u baroortaa geerida dhimashada; meel yar oo ka sarreysa xariiqda dhulka ee koonfur galbeed, ciridka cirro wuxuu kor uqaadayaa marxalad. Boqorka dhimanaya ee jannada ku jira, oo ah dab ololaya oo guduudan oo guduudan, ayaa ku dhex qulqulaya dhul gariir, oo dhaafsiisan dooxada dhex mara buuraha fog. Midabku wuu dhammaanayaa; Daruuruhuna hortiisay yaalliin, dabaysha ayaa hoos u dhacda; dhulku qabow yahay; oo wax walba waxay ku duugan yihiin gudcur.
Musiibada waqtiga ee sanadkii ugu dambeysay waa la qabtay. Ninkii fikirku wuxuu eegaa, oo ku dhex arkaa astaamaha musiibada nolosha iyo saadaasha naftiisa. Wuxuu u arkaa waxtar la’aanta dadaalka wareega dhamaadka nolosha iyo dhimashada, murugo ayaa ku dhacay isaga. Wuxuu jeclaan lahaa inuu jiifsado culeyska sanadaha una gudubto hilmaanta hurdo la'aantu. Laakiin isagu ma awoodo. Qaylada xun ee bini-aadamku waxay jabisaa jahwareerka murugada; oo isna wuu maqlay. Kacsashada nabarrada dadka: Caqiidooyin lumay, saaxiibbo jabay, khiyaano, munaafaqnimo, khiyaano ayaa la arkay. Qalbigiisa qalbigiisa meel kumalaha kuwan. Wuxuu dareemayaa murugada adduunka ee qalqal galinta wuxuuna ku tuuraa qalbiga xanuun badan. Isaga laftiisaba ninku wuxuu maqlaa qaylada dadka oo leh awood uu wax ku arko, wax maqlo, oo hadlo. Noloshu waayihii hore iyo noloshuba inay cod ka dhex maqlaan isaga, oo kuwanu aamusin bay ku hadlaan.
Waddada qorraxda waxay calaamad u tahay nolosha bini-aadamka: inay hubaal tahay inay soo baxdo - iyo in cirku iftiin yahay, ama uu yahay mid laga gudbo - hubaal inay mugdi ku jirto. Tani waxay soconeysey muddo dhan hal sano oo aan la tirin karin waxaana laga yaabaa inay sii socoto ilaa iyo inta aan la garaneyn illaa iyo hadda. Nolosha noloshiisa oo dhan waa uun cirka isku shareertay, waa toosh waqtiga. Waa iftiin qulqulaya, duubnaan leh, qaali ah, oo dhaca isla markaana daqiiqado yar ka socda masraxa masraxa; Dabadeedna wuu gariiraa, wuu lumiyaa, oo mar dambe lama arko. Wuu yimid, oo garan maayo meeshuu ka yimid. Wuu dhaafaa - xaggee? Ninku ma wuxuu u dhashay inuu ooyo, qososho, silicayo oo uu ku raaxeysto, jeclaado, oo keliya inuu dhinto? Hadana ninku miyuu weligiis dhiman doonaa? Shuruucda dabeecadu waa isku mid. Waxaa jira qaab loo yaqaan geedka doogga. Laakin cawsku waa geed caws leh. Ninku waa nin. Cawsku wuu engegaa oo engegaa, su’aal kama taagna iftiinka qoraxda iyo dhaxan. Ninku wuxuu su'aal ka qabaa intuu silicayo, jecel yahay, dhinto. Haddii aan laga jawaabin, muxuu u weyddiinayaa? Raggu waxay su’aalo weydiinayeen da’da oo dhan. Hadana, ma jiro jawaab intaa ka badan oo ay ka badan tahay cod celcelis ah xawaaraha cawska. Dabeecaddu waxay dhalaysaa nin, ka dib waxay ku qasabtaa inuu galo dembiyo ay ku bixiso dhibaato iyo geeri. Dabeecadda dabiiciga ah miyaa loo baahan yahay in la sameeyo iskuday iyo baabi'in? Macallimiintu waxay ka hadlayaan wanaagga iyo xumaanta, waxa qumman iyo khaldan. Laakiin waa maxay wanaagsan? maxaa xun maxaa xaq ah maxaa khalad ah? — yaa yaqaan? Waa inuu jiraa xigmad ku jirta adduunkan sharciga ah. Ma su’aal ninbaa weligi sii jiri doonaa? Hadduu dhammaado dhammaantu waa dhimashada, maxaa farxadan iyo murugada noloshu u badan tahay? Haddii dhimashadu binu-aadmiga oo dhan u dhammaato, sidee buu u ogaanayaa dhimashadiisa?
Aamusnaan ayaa jirta. Markii ay fiidkii sii weynaato, barafku wuxuu ka yimaadaa woqooyiga. Waxay daboolayaan meelaha barafka ah waxayna qarsadaan qabriga qorraxda ee galbeedka. Waxay qarsadaan madhalaysnimada dhulka oo waxay dhawraan nolosheeda mustaqbalka. Oo aamusnaan baa ka timaadda jawaabta su'aalaha dadka.
,,, W,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, earth,,,,,,,,,,,,,,, Dhulkow, dhul yahow! Dhulkow daallan! hoyga ciyaaraha, iyo tiyaatarka dhiig ku dheehan tahay dambiyada aan tira lahayn! Oday sabool ah, nin aan faraxsaneyn, ciyaartoyga ciyaarta, samee qaybaha aad wax ka qabato! Sannad kale ayaa maray, mid kale ayaa yimid. Yaa dhinta? Kumaa nool? Yaa qoslaya? Kumaa ooyaya? Ayaa guuleysta? Kumaa luntay, ficilkii uun baa dhammaaday? Maxay ahaayeen qaybaha? Dembila'aanta dulmiga leh, iyo masaakiinta la dulmay, quduusiinta, dembilaha, dolt, iyo caajiska, waa qaybo aad ka cayaarto. Dharka aad xidhato, waxaad ku beddeshaa muuqaallo isbeddelaya ficil kasta oo guuleysta oo muujinaya nolosha joogtada ah, laakiin waxaad ku sii jileysaa jilitaanka — jilaayaal aad u yar ayaa si fiican u ciyaaraya, oo inyarna garanaya qeybahooda. Weligaa waa inaad ahaataa, jilaa sabool ah, oo ka qarsoon naftaada iyo kuwa kale, oo ku labisnaa dharka qaybtaada, ka soo bax masraxa oo ciyaar, illaa intaad kubixisay oo aad mushahar ku heshay fal kasta oo ka mid ah qaybaha aad ciyaarayso, ilaa aad ka adeegto wakhtigaaga iyo xorriyadda ka heshay ciyaarta. Nin liita! aad u xiiseynaya ama jilaa aan jeclayn! ha faraxsanayn sababta oo ah adiga oo aadan ogayn, maxaa yeelay adigu qayb kama baran doontid qaybtaada - oo gudaha ayaa ka go'doon.
Dadku wuxuu dunida u sheegayaa inuu doonayo runta, laakiin wuu xajiyaa oo kama leexanayo beenta. Dadku codkuu u qayliyaa iftiin, laakiin hoos buu u dhacaa markuu nuurku u yimaado inuu gudcurka ka soo bixiyo. Dadku indhihiisuu isku xidhaa, oo wuxuu u qayliyaa waxba aanu arkin.
Markuu binu aadmi fiirfiiriyo oo waxyaalaha u iftiimiyo, iftiinka ayaa tusi doona kuwa wanaagsan iyo kuwa xunba. Waxa isaga loogu talagalay, waxa la sameeyo, oo ah mid wanaagsan, oo sax ah, ayaa ugufiican. Waxa kale oo dhan, isaga, waa wax xun, waa khalad, ma-fiicana. Waa in loo daayo.
Kii doonaya inuu wax arko, wuu arki doonaa, wuuna garan doonaa. Iftiinkiisu wuxuu muujin doonaa: “Maya,” “ha noqotee,” “Taasi ma ugu fiican.” Markii nin dhegaysto “maya” oo ogaado “haa,” iftiinkiisa ayaa tusi doona: “Haa,” “Tan samee,” “Kan ayaa ugu wanaagsan.” Iftiinka laftiisa lama arki karo, laakiin wuxuu muujin doonaa waxyaabo sida ay yihiin. Jidku wuu cadyahay, markuu nin doonayo inuu arko - oo raaco.
Ninku waa indha la ', dhego la', carrab la '; oo weliba wuu arkay oo maqlay, wuuna hadlay. Dadku waa indha la 'yahay, oo ka baqa iftiinka, oo wuxuu u fiiriyaa mugdi. Waa dhego la 'maxaa yeelay, dhagaysanaysa dareenkiisa, dhegtiisu waxay ku tababartaa kala qaybsanaan. Wuxuu carrab la 'yahay waayo waa indhoole iyo dhago'. Wuxuu ka hadlaa faallooyinka iyo sharafdarrooyinka wuxuuna wali ku sii jiraa maskax ahaan.
Waxkasta waxay muujinayaan waxay yihiin, qofka arka. Ninkii soo booqanaya kama sheegi karo shaybaarka dhabta ah. Wax walbuu u sheegaa abwaankooda iyo magacyadooda, kan maqla, nin aan wax maqli karin ma kala saari karo dhawaaqyada.
Dadku waa baran doonaa inuu wax arko, wuxuu baran doonaa inuu wax maqlo, haddii uu runta maqlo; wuxuu yeelan doonaa awood uu ku muujiyo hadalka, markuu arko oo uu maqlo. Markuu binu-aadmiga arko oo maqlo oo la hadlo xumaanta la'aanteed, nuurkiisu ma idlaan doono oo wuxuu u sheegi doonaa dhimasho la'aan.